Satechi dia manolotra ny Stand Portable Aluminium ho an'ny iPad Pro miaraka amin'ny Seranana 6 | Vaovao IPhone
Tamin'ny fanombohana ny iPad Pro 2021 miaraka amin'ny processeur M1 dia nanamafy izany fotsiny i Apple ity fitaovana ity dia manana ho avy mampanantena ary tena tsy misy na inona na inona hitsiriritany laptop mahazatra, indrindra raha ny momba ny fahefana. Misaotra an'izany fa maro ny mpampiasa no mihevitra ny fividianan'izy ireo ho fitaovana mandeha amin'ny iray, na amin'ny trano na amin'ny asa isan'andro.
Miaraka amin'ity hevitra ity ao an-tsaina, ireo tovolahy avy Satechi dia nanolotra fiorenan'ny aliminioma, miaraka amina endrika mitovy amin'ny Mac Mini, fijoroana mivalona afaka mitondra azy miaraka amintsika foana, ahitana seranan-tsambo fifandraisana hatramin'ny 6, izay ahafahantsika mamadika ny iPad ho solosaina birao afaka segondra na aiza na aiza misy antsika.
Avy amin'i Satechi dia manamafy izy ireo fa ny Stand Stand vaovao sy Hub ho an'ny iPad Pro sy iPad Air dia tadiavin'izy ireo manatsara ny zavatra niainan'ireo mpampiasa Apple iPadNa any an-trano, na any amin'ny birao, na eny an-dalana.
Miaraka amin'ny seranan-tsambo enina mampifandray, mampifangaro ny fahaizan'ny solosaina birao miaraka amin'ny fahafaha-mitaky takelaka. Ny Aluminium Stand & Hub dia manosika ny fetran'ny fananganana nentim-paharazana ary azo aforitra sy azo alefa tanteraka, izay mahatonga azy io ho tsara ho an'ny fametrahana sehatr'asa rehetra, na ao an-trano izany, na any amin'ny birao, na eny an-dalana.
Ny fanohanana manana tariby USB-C izay mifandray amin'ny iPad. Ao ambadiky ny fijoroana no ahitantsika ny port HDMI, SD sy microSD card reader, port audio, USB-C PD port ary USB-A data port.
Ny seranana HDMI dia manohana ny 4K @ 60Hz.
Seranan-tsambo USB-C PD misy fivoahana hatramin'ny 60W.
Seranana data USB-A hatramin'ny 5 Gbps.
Ny slot ny karatra SD sy microSD dia azo ampiasaina miaraka.
Ny Satechi Aluminium Stand sy Hub ho an'ny iPad Pro dia misy amin'ny tranokalan'ity mpanamboatra ity $ 99, vidiny mihoatra ny voahitsy ho an'ny kalitao izay natolotry ny mpanamboatra azy sy ny masontsivana atolotray antsika Kensington miaraka amin'ny Studio Dock.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » iPad Air » Satechi dia manolotra alim-pandehanana alimina alimina ho an'ny iPad Pro miaraka amin'ny seranana 6
Hanana mini iPad miaraka amina endrika Pro tsy ho ela isika